Afghanistan: 29 ku dhimatay Kunduz - BBC Somali
Afghanistan: 29 ku dhimatay Kunduz
9 Agoosto 2015
Image caption Qaraxyada Afghanistan ayaa sii kordhay maalmahan danbe.
Inta badan dadka dhintay waxay ka mid ahaayeen maleeshiyo dowladda taabacsan, waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in shacab ay ku dhinteen.
Weerarkan oo masuuliyadiisu ay sheegatay kooxda Taalibaan, ayaa lagu dilay xubno ka mid ah maleeshiya oo ku sugnaa xarun shidaal, kuwa dhintayna waxaa ka mid ah afar qof oo saraakiil muhiim ah ahaa.
Kunduz waxaa degan qowmiyado kala duwan, waxayna ka tirsan tahay waqooyiga fog ee Afghanistan, halkaas oo dhowaantan ay ka bilowdeen Taalibaanka Bashtun-ka oo ah qowmiyad degta koofurta iyo bariga gobolkaasi.
Maleeshiyada dadka laga laayay waxa ay ahaayeen kuwa iskood isu abaabulay oo dagaal kula jiray Taalibaan dhowrkii bile e la soo dhaafay, waxaana hogaaminaya dagaal oogayaal hore.
Gobolka kale ee waqooyiga dalka Afghanistan ku yaalla oo lagu magacaabo, Badakhshan, waxaa ka imaanaya warar sheegaya in Taalibaan ay meel fagaare ah ku daldaleen qof dumar ah oo ay ku eedeeyeen inay jirkeeda ka ganacsaneysay, waxayna madaxa ka jareen seddax nin oo ay jaajuusnimo ku eedeeyeen.